Ọnụego Bounce Weebụ site na Industrylọ Ọrụ na Ndụmọdụ
Tọzdee, Septemba 1, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Enwetụbeghị m nnukwu onye na-eji ya n'ọrụ ụba ọnụego dị ka isi ngosipụta arụmọrụ nke arụmọrụ saịtị gị. Ọnụego bounce nwere ike ịdị iche site n'otu azụmahịa gaa na nke ọzọ dabere na njikarịcha njin ọchụchọ ha na ogo ha. Ọ bụrụ n’ịkwado maka okwu ndị dị mkpa, o yikarịrị ka ị ga-enwe ọnụego nkwụghachi azụ dị ala. Ọ bụrụ n ’ị were ụfọdụ ndị na-adịghị mkpa mkpa, ị nwere ike iweli olili elu gị.
Anyị gị n'ụlọnga otu oge soro onye nkwusa na-arụ ọrụ na ntanetị rụọ ọrụ ego ya niile na mgbasa ozi ma ọ na-echegbu onwe ya banyere ọnụego ibiaghachi ya. Agbanyeghị, boun na-abụkarị na ndị mmadụ na-apị na mgbasa ozi! Inwe elu ibiaghachi udu bụ ya mma mmasị… na otú o si mee ego. Ya mere, anyị mejuputara mgbagha iji tụọ njikọta njikọ ya dị na mpụga ma kwenye ya!
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa na weebụ ma nwee ntọala Google Analytics maka weebụsaịtị gị, o yikarịrị ka ị maara ọnụego bounce maka weebụsaịtị gị. Ma, ị maara ihe ọ bụla gbasara etu esi agbakọ ya, ihe nkwụghachi ụgwọ ụlọ ọrụ gị bụ ma ọ bụ ọbụlagodi ihe ndị na-emetụta ọnụego ibiaghachi gị? N'ike mmụọ nsọ site na ajụjụ ndị anyị nụrụ, ihe ọmụma a bụ iji nye gị azịza na ụfọdụ ndụmọdụ iji nyere gị aka melite ọnụego ibiaghachi gị. Site na Kissmetrics.